१३.६८ % लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण – Saurahaonline.com
१३.६८ % लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले ९ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र ४ दशमलव १८४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढी नाफा गरेको छ ।
कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा रू. २ करोड ९७ लाखभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिमा रू. २ करोड ६८ लाख रहेको थियो । हाल चुक्तापूँजी रू. ८७ करोड ६८ लाख रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. १६ करोड ६० लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीले रू. ५ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख सापटि लिएर रू. ६ अर्ब ३ करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३ दशमलव ५६ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव ९४ रहेको छ ।
कम्पनीको प्राविधिक विश्लेषण :
कम्पनीको ६४ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ओपनिङ ब्लयाक मारुबोजू आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले हालको प्रवृति आगामी दिनमा उल्टिने संकेत गर्छ । आरएसआई न्यूट्रलजोन ४६ दशमलव शून्य ६विन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरीदविक्रीचाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ६ दशमलवशून्य ४ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि कम हुन्छ भने प्रतिफलपनि कम प्राप्त हुने गर्दछ । त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखालाई १४ दिने औसत मूल्यरेखाले माथिबाट काटेर तलझरेको छ । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा तल छ ।
बिहीवारको शेयरमूल्य रू. ५६७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य सस्तिएमा रू. ५६० मा टेवा पाउने र मूल्य महँगिएमा रू. ५७७ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।